ဘိုကလေးမြို့ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှာ ဆီတိုင်ကီမှ ပလတ်စတစ်ပုံးအတွင်းသို့ ဆီဖြည့်ရာမှေ? - Yangon Media Group
ဘိုကလေးမြို့ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှာ ဆီတိုင်ကီမှ ပလတ်စတစ်ပုံးအတွင်းသို့ ဆီဖြည့်ရာမှေ?
ဘိုကလေး၊ နိုဝင်ဘာ ၇- ဧရာ တိုင်းဒေသကြီး ဘိုကလေးမြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၆ရက် နံနက်က မီး လောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရသည့် အ ကြောင်းရင်းမှာ ဓာတ်ဆီတိုင် ကီအတွင်းမှ ပလတ်စတစ်ပုံးများသို့ ဆီဖြည့်ရာမှ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ဖြစ် ပေါ်ကာ မီးစတင်လောင်ကျွမ်း ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆီအရောင်းတာဝန်ခံ ကို အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဘိုကလေးမြို့ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ဗိုလ်တေဇလမ်း ရွှေငါးကြီးဆိပ်အနီးရှိ ပိုင်ရှင် ဦးသံချောင်းလေး၏ ပေ ၂ဝx၂၅ ပေအုတ်ညှပ်၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ် ခင်းနှစ်ထပ်ဂိုဒေါင်အတွင်း၌ ဓာတ်ဆီတိုင်ကီအတွင်းမှ ပလတ် စတစ်ပုံးများသို့ ဆီဖြည့်ရာမှ တည် ငြိမ်လျှပ်စစ်ဖြစ်ပေါ်ကာ နိုဝင်ဘာ ၆ရက် နံနက် ၁၁နာရီ မိနစ် ၂ဝ တွင် မီးစတင် လောင်ကျွမ်းခဲ့သည့် အတွက် ဘိုကလေး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ မော်ကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ဘိုကလေးမြို့ နယ် အရန်မီးသတ်စခန်းမှ မီးငြှိမ်း သတ်ယာဉ်များနှင့် ဒေးဒရဲမြို့နယ် များမှ မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ်များ စုစု ပေါင်း ၁၃စီးတို့နှင့်အတူ သန္ဓေတပ် ဖွဲ့ဝင် ၅ဝ၊ အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ဝဝ တို့က ရေဂါလန် ၈၈ဝဝဝ ခန့် အသုံးပြုငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရသည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် ပေ ၂ဝx ၂၅ပေ အုတ်ညှပ်တိုက်တစ်လုံး၊ ၁ဝပေx၂၅ပေ အုတ်ညှပ်တိုက် နှစ်လုံး၊ ပေ ၂ဝx၃၅ပေ အုတ်ညှပ် တိုက် သုံးလုံး၊ ပေ ၃ဝx၂၅ပေ အုတ်ညှပ်တိုက်တစ်လုံးနှင့် ပေ ၂ဝxပေ၃ဝ အုတ်ညှပ်တိုက်တစ် လုံး စုစုပေါင်း ရှစ်လုံး မီးလောင် ခံရပြီး ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးမှာကျပ် ၁၃၁၂၅ဝဝဝခန့်ဖြစ်သည်။
မီးလောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆီအရောင်းတာဝန်ခံအောင်ဖြိုး ဦးအား ဘိုကလေးမြို့နယ်ရဲစခန်း မှ (ပ)၂၅၈/၂ဝ၁၇ဖြင့် အရေးယူ ထားကြောင်း သိရသည်။